सरुवा भएका सहसचिव गएनन्, आउनेले कुर्सी नै पाएनन् - Nepal Face
८, मंसिर २०७७
कमलप्रसाद भट्टराई र लक्ष्मीकुमारी बस्नेत
काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव कमलप्रसाद भट्टराईलाई ३ महिनाअघि कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालयमा सरुवा गरेकोमा उनी अहिलेसम्म पनि रमाना लिएर खटाएको ठाउँमा गएका छैनन् । भट्टराई रमाना बुझेर खटाएको कार्यालयमा नगएका कारण कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालयमा एक बर्ष कार्यरत रही पर्यटन मन्त्रालयमा सरुवा भएकी लक्ष्मीकुमारी बस्नेतले बस्ने कुर्सी समेत पाएकी छैनन् ।
भट्टराईको ठाउँमा बस्नेतलाई सरुवा गरिएको थियो । तर बस्नेतलाई कुर्सी समेत दिइएको छैन । २०७२ फागुनमा हङकङको महाबाणिज्यदूत नियुक्त भई ४ बर्ष अवसर पाएका कमल भट्टराईलाई कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीकै आग्रहमा सरुवा गरिएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीको दाबी छ । तर उनी सरुवा भएको ३ महिनासम्म पनि खटाएको ठाउँमा नगई अटेर गर्दैआएका छन् । उनका कारण प्रदेशमा काम गरेर संघमा आएकी सहसचिव बस्नेतले जिम्मेवारी पाउन सकेकी छैनन् । प्रदेशमा सचिव खाली भएकाले निमित्तका भरमा कामकाज गर्नुपरेको छ ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २०७७ भदौ ९ मा बरिष्ठताका आधारमा सहसचिवहरुलाई प्रदेशमा सरुवा गरेको थियो । प्रदेशमा कार्यरत सहसचिवलाई संघमा सरुवा गरिएको थियो । तर सरुवा भएको १ महिना पुग्न लागिसक्दा पनि सहसचिवहरु खटाएको प्रदेशमा गएका छैनन् । सरकारी सेवामा प्रवेश गरिसकेपछि राज्यले खटाएको ठाउँमा जान्न भनेर चुनौती दिने कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही नगरी सरकारले अनुशासनहीनतालाई प्रश्रय दिएको छ ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बरिष्ठताका आधारमा सरुवा गर्दा खटाएको ठाउँमा जान नमान्ने सहसचिवहरु भोलि त्यही मन्त्रालयको सचिव भएमा उनीहरुले गरेको निर्णय मातहतले कसरी पालना गर्ने त ? यो प्रश्न अहिले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीहरुबीच उठ्ने गरेको छ ।
सोमवार, मंसिर ८ २०७७०८:४४:४५
निजामती अध्यादेश आउने चर्चा, कस कसलाई हुन्छ फाइदा ?
संवैधानिक निकायमा सिफारिस गरिएका ४५ जनाको नाम संसद्‍मा दर्ता, संसदीय सुनुवाइ नहुने
ललितपुरका सिडिओसहित गृहका १८ कर्मचारीको सरुवा(सूचिसहित)